खरसाङमा मोर्चाका १७ जनाले गरे शपथ ग्रहण, तृणमूलका ३ अनुपस्थित – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsखरसाङमा मोर्चाका १७ जनाले गरे शपथ ग्रहण, तृणमूलका ३ अनुपस्थित
आज खरसाङमा मोर्चाका विजयी १७ जना नगरपार्षदहरुले शपथ ग्रहण गरे भने तृणमूलका ३ जना आज समारोहमा अनुपस्थित रहे। खरसाङ महकुमा शासक देवाशिष चट्टोपाधयले १७ जनालाई खरसाङ नगरपालिकामा नगरपार्षदको रुपमा शपथ ग्रहण गराएका छन्।
यसमा खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत मोर्चाका बिजय हुनेहरु क्रमैले वार्ड नम्बर १बाट ब्रिगेन गुरुङ, २.कृष्ण लिम्बु, ३. ग्रेसी भोटिया, ४.सन्ध्या छिरिङ लेप्चा, ५.मोती मोक्तान लामा, ६.राजु सुन्दास, ७.श्याम शेर्पा, ८.पेम्बा योञ्जन, ९.शान्ती राई, १०.डोल्मा तामाङ, १३.अमिता लामा, १४.रबि तामाङ, १६.शिला थापा, १७.मोहन राई, १८ शिव तामाङ नेगी, १९.देवकी प्रधान सुब्बा र २०. सुवास प्रधानले शपथ ग्रहण गरे। तर तृणमूलका विजयी प्रार्थीहरु क्रमैले वार्ड नम्बर ११ बाट निङमा भोटिया, १२. बाट पेम्बा तामाङ र १५ बाट सन्तोष पट्वारी अनुपस्थित रहे।
शपथ ग्रहणपछि गोजमुमोले बोर्ड गठन गऱ्यो अनि प्रथम सभा पनि शिव तामाङ नेगीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा सबैले निर्णय लिए अनुसार खरसाङ नगरपालिकामा चेयरम्यानको रुपमा वार्ड नम्बर २ बाट बिजय हुने कृष्ण लिम्बुलाई चयन गरियो। तिनलाई महकुमा शासकद्वारा शपथ ग्रहण गराए भने नयाँ चेयरम्यानद्वारा भाइस चेयरम्यानको रुपमा वार्ड नम्बर १ बाट बिजय हुने ब्रिगेन गुरुङलाई शपथ ग्रहण गराए। दुवैले आजदेखि नै खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको रुपमा आफ्ना कार्य थालेका छन्।